Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Centara Signs MOU miaraka amin'ny KMA Hotels ho an'ny hotely enina Myanmar
Centara Hotels & Resorts, Mpandraharaha fandraisam-bahiny malaza any Thailandy, ary KMA Hotels Group, sampana iray an'ny Vondron'orinasa Kaung Myanmar Aung (KMA), dia nanambara ny fanaovan-tsonia ny MOU hanombohana ny fampandrosoana sy ny fanavaozana ny hotely 6 miorina amin'ny toerana fizahan-tany malaza any Myanmar. izy rehetra dia hitantana eo ambanin'ny marika Centara. Hanomboka amin'ny 2019 ny asa amin'ny tetikasa.
Ity tetik'asa ity dia hahita trano telo an'ny KMA Hotels misy ao Inle, Naypyitaw, ary Taungoo mandalo fanavaozana alohan'ny hisokafana indray, ary ny fampandrosoana hotely 3 vaovao any Bagan sy Than Daung. Ny hotely 3 vaovao dia ny Resort Centara Bagan River View Resort & Spa Kaytumadi Dynasty Bagan Resort, Centara Boutique Collection ary Shwe Than Daung Resort, Centara Boutique Collection. Ireo trano fandraisam-bahiny enina dia hiasa eo ambanin'ny marika Centara sy Centara Boutique Collection izay ambony sy ambony. Ny Centara Paradise Inle Lake Resort & Spa dia hisokatra amin'ny Q4 amin'ity taona ity.
Ny fifanarahana dia manamarika ny fidiran'i Centara amin'ny iray amin'ireo tsena fizahan-tany haingana indrindra eto an-tany ary ahafahan'ny orinasa miantoka ny toeran'ny Myanmar lehibe.
"Ny fiaraha-miasantsika amin'ny KMA Hotels dia manan-tantara lehibe ho an'i Centara," hoy izy Thirayuth Chirathivat, CEO an'ny Centara. “Manome antsika fotoana hananganana fisehoan-javatra manan-danja ho an'i Centara ao amin'ny firenena iray mety hanana fivoarana fizahan-tany izy ity, ary manantena ny handray anjara amin'ny fampandrosoana an'i Myanmar izahay, ary manome safidy bebe kokoa an'ireo mpandeha mba hankafy ny fenitra fandraisam-bahiny nentanin'ny Thai. manerana ny toerana maro samihafa. ”
"Faly izahay fa hitondra ny fahaizan'izy ireo mitantana sy marika marimaritra iraisana amin'ny toerana enina malaza any Myanmar i Centara," U Kaung htet Tun, Tale mpitantana ny KMA Group. “Mampiseho fitomboana lehibe amin'ny fitomboan'ny fizahantany i Myanmar, ary ny fisian'i Centara eto dia maneho dingana mandroso ho an'ny indostrian'ny Hotely sy fizahan-tany.
Myanmar no firenena faharoa lehibe indrindra any Azia atsimo atsinanana ary mirehareha amin'ny iray amin'ireo toekarena mitombo haingana indrindra ao amin'ny faritra. Ny sehatry ny fizahan-tany ao amin'ny firenena dia napetraka tsara mandritra ny fitomboana maharitra; ny tahan'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany 8.5% isan-taona hatramin'ny taona 2025 dia mametraka an'i Myanmar ho eo an-tampon'ny tsena fizahan-tany haingana indrindra.
Ny trano fandraisam-bahiny enina any Myanmar dia porofon'ny paikadin'i Centara fanitarana, izay miantso ny fampitomboana avo roa heny ny isan'ireo fananana eo ambany fitantananany amin'ny 2022, ary ny fahaiza-manaon'ny Centara sy ny developer developpement KMA Group dia kasaina hampiakatra ny sehatry ny fandraisana vahiny.